Yintoni i-methenolone enanthate powder? | AASraw
Yintoni i-methenolone enanthate powder?
/Blog/I-Methenolone Enanthate/Yintoni i-methenolone enanthate powder?
ezaposwa ngomhla 03 / 07 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Methenolone Enanthate.
1. Yintoni i-methenolone enanthate kunye ne-methenolone enanthate powder?
I-methenolone enanthate powder ligama lemichiza ye-primobolan (primo). I-methenolone enanthate powder i-powder crystalline emhlophe, ne-CAS No.303-42-4. I-methenolone enantahte isetyenziswa ngokuqhelekileyo ngabantu abanqwenela ukugcina i-estrogen kunye nemiphumo echaphazelekayo kunye ne-androgenic, ubuninzi be-anabolic ne-androgenic steroids (AAS) ethandwa kakhulu kwi-cycling. I-methenolone enanthate yaqala ukukhishwa kwi-1962 yi-Squibb phantsi kwegama le-trade Nibal (ngomlomo) kunye neNibal Depot (injectable). Lo kwakuyimveliso emfutshane kakhulu kwimarike yase-US kwaye phakathi kwe-1960 ye-German powerhouse yeprojekthi ye-Schering yayiza kuba nayo yonke amalungelo kwi-hormone ye-Methenolone.
Inkcazelo ye powinolone enanthate powder
igama I-powhenone enanthate powder, ipowmo ye-primo E
Inombolo yeCAS 303-42-4
Ukungcola > 98%
I-Molecular Formula C27H42O3
Isisindo somzimba 414.62100
Indawo yokunyibilika 289-292 ℃
ukugcinwa Temp RT
Umbala Powstalline powder
I-methenolone enanthate yi-dihydrotestosterone esekelwe kwi-ananbolic steroid, i-methenolone enanthate iyimvelaphi yesterter ye-methenolone edayiswa ngokuqhelekileyo phantsi kwegama le-brand primobolan. I-methenolone enanthate isetyenziswe ngabantu abanomdla kakhulu we-estrogenic effect, nokuba ne-estrogenci efanelekileyo kune-annadrolone, i-methenolone ngendlela ye-enanthate kunye ne-acetate, i-methenolone ayinayo imiphumo ye-estrogenic kunye nemiphumo yayo kwi-cholesterol, i-methenolone i-alos ayixhaswanga I-axis ye-HPTA, ngenxa yesi sizathu, amaninzi omzimba usebenzisa i-methenolone phakathi kwimijikelezo ye-steroid.
2. Yintoni eyenziwa yi-methenolone enthate?
Kwimpilo yezokwelapha, i-methenolone isetyenziselwa ukuphatha abantu abajongene nezimo apho ukutshabalalisa imisipha kunye nokulahlekelwa kwesisindo esinzima kuyimpawu. Ezinye izinto zibandakanya: i-immunostimulant kubantu abachasene nezifo, ukuchithwa kweemeko, ukulungelelanisa ukuchasana nemiphumo ye-corticosteroid yexesha elide kunye nokunyanga kwe-osteoporosis kunye ne-sarcopenia (ukulahleka kwemisipha ehambelana nokuguga). I-Primo, njengo-Anavar, ibonakaliswe ukuba yinyameko kwimiphumo yaso emibi eye yasetyenziswa kubantwana kunye neentsana ukwenzela ukuba kukhuthazwe ukuzuza ubunzima kwiintsana ezingekazalwa ngaphambi kokuba ziboniswe iziphumo ezibi okanye ukungcola. Omnye unokukwazi ukubona ngokukhawuleza ukuba ukukhwabanisa kwe-anabolic steroid livela ngaphakathi kwintlalo yezemidlalo kunye nokwakha umzimba, njengoko kuboniswe ngumbonakalo obonakalisa iziphumo ezinobuthakathaka kunye ne-orrogenic ezincinane.
In abanxibe impahla kwintsimi, abaninzi abagijimi kunye nabazimba bomzimba bathabatha i-methanolone enanthate-enanthate powder ukuze bafumane ubunzima bomzimba obumzimba. I-enthenate ye-Methenolone ithandwa kakhulu kubadlali abaxhomekeke ngaphandle kwaye bazama ukugcina amaninzi amaninzi xa kunokwenzeka ngexesha lokukhutshwa kwekhalori. Abaninzi bomzimba abakhuphisanayo abanakuze baqwalasele i-stack yokuqala ngaphambi kokuncintisana kunye nokongeza kwethu kwe-methenolone. I-methenolone enanthate yi-alibolic moderation eneprogram ephezulu kakhulu kunye ne-androgenic. Iimpembelelo ze-anabolic zifaniswa ne-DECA durabolin, i-althought effects effects androgenic ininzi kakhulu. Iintlawulo oza kuzifumana kumjikelezo we-primo ziya kuba yinzuzo encinci kwimisipha yomgangatho. Unokulindela ukugcina iimali ezinyangeni ezimbalwa emva kokugqiba umjikelo wakho.
3. I-methenolone enanthate isebenzisa / i-methenolone ye-enanthate dosage
I-methenolone inanthate isigamu-ubomi ijikeleze iintsuku ze-10. Imithi yonyango i-methenolone eanthate dosages I-200mg njengesilinganisi sokuqala, ilandelwe kunye ne-100mg nganye ngeveki ukwenzela ixesha elipheleleyo leyeza. Uluhlu lunakho ukusuka kwi-100mg nganye okanye ezimbini kwiiveki ukuya kwi-200mg nganye ezimbini ukuya kwiiveki ezintathu.
Isilinganisi se-methenolone enanthate sokwakha umzimba, i-athletics, nokuphuculiswa komsebenzi, i-primobolan doers yokuqala yefomathi ejoyiweyo ngokuqhelekileyo iqale malunga ne-400mg ngeveki. Amadayimenti aphakathi kwe-Primobolan aqhelekileyo kwi-400 - 700mg ngeveki, ekufuneka ibe ngokwaneleyo ngokwaneleyo, kwaye abasebenzisi abaphezulu bangaba nokuphakama njenge-800 - 1,000mg ngeveki. Ama-Primobolan ama-dosage ngokwemigaqo yokhuseleko kunye nokusetyenziswa okuncinci kudla ngokubanzi kwi-50 - 100mg ngeveki.
4. Imiphumo yecala le-methenolone enanthate
Iimpembelelo ze-methenolone ezinamanqanaba afanelekileyo ziquka:
ukulahleka kweenwele ngokukhawuleza
ukukhula kweenwele zomzimba
ukulungiswa kwabasetyhini (kubonakaliswe ukunyuka kweenwele kwiindawo ezahlukahlukeneyo zomzimba, inzulu kunye nokukhulisa i-clitoris),
ukunyuswa okunyanisekileyo kwamanqanaba engcinezelo yegazi
ukuphulwa kwamanqanaba e-cholesterol
izinga eliphantsi lobunyoyi besibindi
Qaphela ukuba le miphumo ayinzulu kwaye ihlala njalo. Kwiimeko ezininzi, ayenzeki. Kuphela kufuneka ulawulo ngokuchanekileyo kwaye awuyi kuba naluphi na ukuphambuka kwempilo.
5. Thenga i-methenolone enanthate powder online
Njengoko kunzima ukufumana umgangatho we-methenolone ephezulu, abantu abaninzi bangathanda ukuthenga i-methenolone enanthate powder, kwaye benze i-engenolone entanate injection. I-Wht yindawo efanelekileyo yokuthenga i-methenolone enanthate powder? Ewe, intanethi. xa ucinga i-methenolone enanthate powder online, unokufumanisa ukuba kukho imithombo ephezulu ye-methenolone enanthate powder, i-methenolone enanthate powder suppliers. Kodwa indlela yokuchonga ukuba ngubani owona mthengisi ogqithiseleyo we-methenolone enomthini wokuphakela ngokugqithiseleyo kubaluleke kakhulu. I-AASraw iya kuba yinto ekhethekileyo.
tags: uthenge i-methenolone enanthate powder, I-Methenolone Inanthate powder
Thenga i-Methenolone Inanthate powder: musa ukuyithenga ngaphambi kokuba wazi ezi !!!
I-Methenolone Inanthate powder yokuthengisa: Izinto ze-4 zokusebenzisa i-Primo ngokuchanekileyo!
Thenga ukuhlambuluka okuphezulu Tadalafil powder online: Zonke izinto ufanele ukwazi !!!	Indlela yokusebenzisa i-Topiramate powder ye-Weight Loss?